एयरलाइन्सले खाइदिए यात्रुको पैसा, टिकटको पैसा फिर्ता गरेनन्……. – Khabar PatrikaNp
एयरलाइन्सले खाइदिए यात्रुको पैसा, टिकटको पैसा फिर्ता गरेनन्…….
August 19, 2020 229
अहिले नेपालमा पनि दैनिक सयौं जना कोरोना संक्रमितहरु देखिन थालिसकेका छन् । सरकारले स्वीकार नगरे पनि स्वास्थ्य विज्ञहरुले अहिलेको संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको बताउँदै आएका छन् । संक्रमण समुदायमै फैलिन थालेपछि कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहहरुले लकडाउनको घोषणा समेत गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै खर्चमा स्वदेश आउन र क्वारेन्टिनमा बसेर संक्रमण नरहेको पुष्टि भएपछि घर जान समेत सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले समेत यात्रुलाई मार पर्नेगरी टिकट काट्ने तर उडान गर्न नसकेपछि पैसा फिर्ता गर्न चाहिँ आनाकानी गरिरहेका छन् । रातो पाटी
Prevहिराको मास्क : मुल्य ६ लाख ४० हजार रूपैयाँ !
Nextराष्ट्रकवि घिमिरेले लगाएको गुण नेपाली जनताले भुल्ने छैनन्ः प्रधानमन्त्री केपी ओली
संसारकै पहिलो घटना,हङकङमा एउटै व्यक्ति दुई पटक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित